XASAASI:-Wasiir Beyle oo maalmaha soo socda Iscasilaya & Shaqsi lama filaan ah oo lagu bedelayo… | Baled Weyn Media Center
XASAASI:-Wasiir Beyle oo maalmaha soo socda Iscasilaya & Shaqsi lama filaan ah oo lagu bedelayo…
Nov 18, 2017 - jawaab
Warar hoose ay warbaahuinta ogaatay ayaa sheegaya in wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu maalmaha soo socda iscasili doono, ka dib cadaadis xoog leh oo kaga yimid Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sii qorsheystay shaqsiga lagu bedelayo wasiir Beyle oo maalmaha soo socda warqadiisa Istiqaalada gudbin doona, waxaana xilkaasi loo magacaabi doonaa Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr Cali Saciid Fiqi, oo maalmahan mashquul ku ah xafiiska Ra’iisul wasaaraha.
Ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa ah shaqsi galangal weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna saaxiib dhow la yahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waana shaqsi loo arko inuu la imaan karo isbedelo waa weyn oo guul u ah umadda Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaare Xasan cali Kheyre ayaa ku dhow inuu gabi ahaanba isku shaandheyn ku sameeyo xukuumadiisa, waxaana soo badanaya masuuliyiinta iscasileysa waliba iyagoo culeyska ka sheeganaya Kheyre.
Si kastaba ha ahaatee hadii uu iscasilo wasiir Beyle waxay noqon doontaa culeys kale oo siyaasadeed oo dowlada Farmaajo ay wajihi doonto, waxayna arintaan guul u tahay mucaaradka kasoo horjeeda dowlada.